Qoyska kalluumeyste uu yaxaas cunay oo ka walaacsan in laga saaro guri kiro ah - Radio Ergo
Xaliimo waxay u taag la'dahay quudinta saddexdeeda gabdhood tan iyo markii uu ninkeeda oo kalluumeyste ahaa uu yaxaas cunay/Maryan Sheekh/Ergo
(ERGO) – Xaliimo Xasan Cumar waxay qarka u saaran tahay in laga saaro guri kiro ah oo ay la deggen tahay saddexdeedii carruurta ah, kaddib markii uu seygeeda, oo kalluun-dabato ahaa, oo ay nolosha qoyska ku tiirsaneyd uu yaxaas qaaday billowgii bishaan.
“Kirada waa nagu aruurtay, 400,000 oo shillin Soomaali ah ayaa na lagu leeyahay. Labo bil kiro ma iska bixinin. Naagta mininka iska leh iga bax ama kiradey i sii ayay leedahay. Aniga waxaan iska ahay masaakiin oo iskama bixin karo. Mana aqaani meel aan aado,” ayay tiri Xaliimo.
Qoyskaan danyarta ah waxay noloshooda ku tiirsanayd lacag yar oo ay ka heli jireen mallaay uu ninkeeda ka soo dabi jiray webiga Shabeelle. Waxaa ninkeeda qaaday yaxaas 7 September, isagoo ku jira shaqadiisii kalluumeysiga.
Xaliimo ayaa tilmaantay in ninkeeda oo lagu magacaabi jiray Axmed Aadan Buubaale uu aaday webiga aroortii sideedda subaxnimo si uu ula soo baxo shabaagtiisa oo habeenkii ka horreeyay subaxaas uu webiga ku dhaaftay si mallaay badan uu ugu galo. Balse dib uguma soo laaban xaafadda. Qoyska iyo asxaabtiisa ayaa ku wargeliyay dadka tuulada deggen inay u soo sheegaan qofkii arko.
Subixii xigtay nin mallaay-dabato ah oo tuulada deggen ayaa meydka Axmed shabaagtiisa ka dhex helay isagoo markii hore u maleeyay inuu mallaay weyn soo qabsaday, balse markii uu soo saaray ayuu arkay in uu yahay meyd xubnaha qaar ay ka maqan yihiin. Xaliimo ayaa aqoonsatay meydka seygeeda.
“Mararka qaar waan iska ooyaa markaan soo xasuusto. Dadka waxay i leyihiin ninkaas Ilaahay ha u naxriisto … iska cafi. Aniga ma hilmaami karo wuxuu ahaa qofka keliya ee aan ku tiirsanayn,” ayay tiri.
“Aniga iyo soddohdayba oo guriga nala joogta isku gacan ayaan ahayn. Wuxuu keeno ayaan isla cuni jirnay. Laakiin, hadda waxaan ku tiirsannahay kista yar ee aan ka helno dadkaas Islaamka ah.”
Axmed oo madi ahaa, qoyska ugama tagin wax hanti kale ah ama xoolo.
Xaliimo oo hadda waqtigeeda u kala qeybisa daryeelka soddohdeed oo xanuunsan iyo saddexdeeda gabdhood oo tan ugu weyn ay jirto lix sano ayaan awoodin inay magaalada ka soo shaqeysato. Waxaa hadda ku adkaatay inay xitaa hal waqti dabka u shiddo carruurteeda maalinkii oo dhan.
“Annaga waxaan hadda wax karsannaa markii aan muslimka kaalmo ka helno oo ay taleefoonka wax noogu soo tuuraan ama raashin aan karsanno ay noo keenaan. Waxaan muslimiinta ka codsaneynaa inay na soo caawiyaan. Been ma fiicnee dhibaato ayaan ku sugannahay, carruurta quudkooda ayaan u taag la’ahay, iskaba dhaaf inaan kiro bixiyo e,” ayay tiri.
Xaliimo ayaa sheegtay in ninkeeda uu ku yiri ‘dabka sii shid’ markii uu baxayay maalintii uu yaxaaska qaaday.
Waxay maalin walbo karin jirtay mallaayga uu ninkeeda soo dabo, qeybna reerka ayaa quudan jiray halka qeybta kale uu ninkeeda ku soo wareejin jiray magaalada Jowhar.